Fitantanana ny rindrambaiko fampidiranao fampiharana. Martech Zone
Fitantanana ny rindranasa fampidiranao fampiharana
Alakamisy, May 20, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Amin'ny 2 ora sy sasany maraina eto Paris, France… ary tsy mahita tory aho ka inona no tsara kokoa hatao noho ny manoratra lahatsoratra bilaogy! DK New Media dia niara-niasa tamina orinasa roa vao tsy ela izay nampihatra ny teknolojia hitantanana ny azy ireo fampiharana interface tsara (API). Ny API dia nanjary endrika matanjaka sy ilaina amin'ny sehatra rehetra hahafahan'ny mpivarotra mampiditra sy manamboatra ny rafitr'izy ireo.
Ny ampahany sarotra amin'ny fampiharana ny API ho an'ny rindrambaiko dia miantoka ny fiarovana ny orinasanao amin'ireo hackers, fananganana serivisy fanaraha-maso sy fitaterana hanaraha-maso ny fampiasana azy, ary fiarovana ny tontolon'ny famokarana ataonao amin'ireo mpanjifa manararaotra izay mitarika ny rafitrao hidina.
Raha tokony hanontany ekipa an-jatony isan'ora mba hahitana raha nisy fiovana, dia manamarina fa ny ekipa tsirairay dia zahana indray mandeha isan'andro fotsiny. Raha te hanavao ekipa tanana ny Coyle Media dia azon'izy ireo atao ny manafoana izany fangatahana izany. Io dia mampihena ny isan'ny antso an'arivony isan'andro. Ho mora kokoa taminay ny nanontany ny azy ireo fotsiny API isaky ny 15 minitra isaky ny mpanjifa… saingy tsy nilaina izany dia nanangana buffer tsara izahay hiantohana ny tsy fanararaotana ireo API Twitter sy Facebook. Hatreto aloha - mbola tsy nokasihina mihitsy izahay.
Raha matotra amin'ny fandefasana API ny sehatra misy anao, ianao dia tsy maintsy manome sosona insulate eo anelanelan'ny API sy ny fangatahanao hiarovana ny fahombiazan'ny rafitra. Manary fitaovana bebe kokoa hatrany ao aminao API tsy vahaolana lafo vidy. Misy maromaro API vahaolana momba ny fitantanana eny an-tsena izay tsy vitan'ny manao izany, fa manana endri-javatra matanjaka ahafahanao mivezivezy amin'ny mpanjifa (avelao ny antso isan-minitra, na ora na isan'andro), manome tatitra momba ny fampiasana ao amin'ny API antso, ary mamela anao hitady vola sy hanara-maso ny fampiasana azy mihitsy aza. Ny mpamatsy angon-drakitra sasany dia miantoka ny antso isaky ny antso ataonao (ohatra: Rapleaf).
Mampivelatra ny fitaovana ilaina hitantanana ny API dia zavatra iray izay tsy mahomby firy amin'izao andro izao satria misy serivisy maro any hanao izany ho anao. Misy fanta-daza API Sehatra fitantanana dia:
ChaCha nampihatra ny API ny fampiasana Mashery sy ny fizotrany dia tena tsotra. Ny ekipa ao Mashery dia nampihatra ireo antso ary nanome interface ho an'ny mpampiasa ChaCha hampiroborobo ny API misy azy ireo ho an'ny fiarahamonina. Nanampy tamin'ny fampiroboroboana sy ny marketing ny API aza izy ireo. Ny saran'ny ankapobeny amin'ny serivisy Enterprise level toy ity dia ambany noho ny karama feno na ny tahan'ny fifanarahana ho an'ny mpandraharaha tokana izay mahazo $ 100K isan-taona.
Raha miara-miasa amin'ny mpivarotra Teknolojia Marketing miaraka amin'ny API ianao, dia azonao atao ny manontany azy ireo ny momba azy ireo API fitaovana fitantanana sy ny fomba hanarahan'izy ireo maso, hiarovana ary hiantohana ny famokarana dia tsy fanelingelenana ataon'ny mpandraharaha manao asa be loatra, kamo!
Tags: Mizana 3APIfampiharana interface tsarachachamasheryrafitra sonoawebservius
Ahoana ny fomba hisafidianana mpivarotra SMS / Text Messages